Ankoatra an’i Madagasikara mpampiantrano dia anisan’ny mandray anjara amin’izany ihany koa ireo nosy manodidina toa an’i Seychelles sy Maurice ary Comores. Misy ny fiofanana sy fizarana traikefa mandritra ireo roa andro ireo. Manana anjara andraikitra lehibe eo amin’ny tontolon’ny fitsaboana ireo mpiasan’ny fahasalamana izay misahana ny vonjy taitra. Izy ireo no mandray voalohany ny marary raha misy ny iharan’ny loza, hoy ny dokotera Randrianjatovo Léon, sekretera jeneralin’ny fikambanana. Tanjona ny hanatsara ny sehatry ny fitsaboana eto amintsika, mba ho vitsy ny maty. Ezahina ihany koa ny hikololoko ireo marary.
Nanambara ny hisian'ny kaonferansa lehibe manodidina ny " investissements de haute qualité" na fampiasam-bola avo lenta amin'ny volana jolay izao Andriamatoa Kentaro Sonoura, minisitra delege eo anivon'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny japoney izay nanatanteraka fitsidihana ara-dinik'asa teny amin'ny birao fiasan'ny praiminisitra Malagasy, Mahafaly Solonandrasana Olivier, ny alarobia teo. Ho fanainga vaovao entina hampiroboroboana ny fampiasam-bola vahiny eto Madagasikara ity hetsika ity ka mpandraharaha vahiny an-jatony no handrasana ho avy eto Madagasikara amin'izany.
Anisan’ny tetikasa hifandrimbonan’i Madagaikara sy Japon izay efa mandeha ankehitriny ny fanitarana ny seranan-tsambon'i Toamasina sy Ambatovy. Nisaoran'ny praiminisitra Malagasy ny fifandraisana matotra eo amin’ny roa tonta amin'ny alalan'ny tohana maro ataon'ity firenena ity eto amintsika, indrindra ny fanampiana ireo traboina ataon'ny JICA amin'ny loza voajanahary. Mbola iriany hiroborobo hatrany ny fiaraha-miasa.
Alizay malefaka no hamaritra ny toetr’andro eto amintsika ary amin’ny faran’ny herinadro any vao hahazo hery io Alizay io. Amin’ny maha vanim-potoanan’ny ririnina azy dia mibahan-toerana ny hatsiaka saingy mety hisy ihany koa fotoana kely hampafana ny andro. Misy zavona ny maraina dia handrahona ihany koa avy eo. Ny maripana ambony dia hiakatra kely eo amin’ny 20 na 21 °C. Tsy hisy intsony hafanana be, raha araka ny fantatra. Ny faritanin’i Fianarantsoa no mangatsiaka indrindra amin’izao fotona izao izay manana maripana 9°C ary ny faritra Boeny sy Atsimo Andrefana no mafana indrindra izay manana maripana hatrany amin’ny 32°C
Toy ny kaominina rehetra eto an-drenivohitra dia mangataka ny mba hahazoany famatsiam-bola toy ny CLD ihany koa ireo lehiben’ny fokontany 192 isa mandrafitra ny renivohitra. Eny ifotony mantsy no tena miainga ny fampandrosoana raha ny fanazavan’ny lehiben’ny fikambanana hivondronan’izy ireo noho izany tsy tokony hatao ambanin-javatra ny fijerena ny fokontany.
Dahalo an’arivony no nilavo lefona tany amin’ny Faritra Anosy nandritra ilay operation speciale nokarakarain’ny Faritra tany an-toerana, iray volana lasa izay. Ny USAD nivondronan’ny fokonolona sy ny mpitandro ny filaminana no indray nifandona tamin’izy ireo, hetsika izay fantatra fa mbola hotohizana. Miantso ny fitondram-panjakana mba hijery ireo dahalo niova fo ireo araka izany ireo fokonolona any an-toerana.